Liverpool Oo Real Madrid Ku Wargalisay Qiimaha Ay Uga Samri Karto Mohamed Salah & Coutinho Oo Haatanba Sii Ogaaday Laba Xiddig Oo Ay Reds U Dhaqaaqi Doonto Badalka Salah – Kooxda.com
Home 2018 March Ingiriiska, Spain, Wararka Maanta Liverpool Oo Real Madrid Ku Wargalisay Qiimaha Ay Uga Samri Karto Mohamed Salah & Coutinho Oo Haatanba Sii Ogaaday Laba Xiddig Oo Ay Reds U Dhaqaaqi Doonto Badalka Salah
Liverpool Oo Real Madrid Ku Wargalisay Qiimaha Ay Uga Samri Karto Mohamed Salah & Coutinho Oo Haatanba Sii Ogaaday Laba Xiddig Oo Ay Reds U Dhaqaaqi Doonto Badalka Salah
Kooxda Liverpool ayaa xiisaha kooxda Real Madrid u qabto Xiddigaha Wacadaraha dhigaya ee Mohamed salah ugu jawaabtay qiimaha ay doonayso in ay ku in ay ku fasaxdo xiddiga sida sheegayaan wararka ka imanaya Spain.
Xiddigii hore ee kooxda Roma ayaa 32 gool dhaliyay xilli ciyaareedkan taas oo keentay in ay Real Madrid xiiso u muujiso adeegiisa.
Wargayska El Confidencial ayaa sheegaya in ay Real Madrid xiriir la samaysay kooxda Liverpool si ay wax uga waydiiso xiddiga waxana lagu war galiyay qiimaha xiddiga lagu heli karo.
Liverpool ayaan xiddigeeda u ogolaan doonin in ay si jaban ku fasaxdo iyada oo lagu soo waramayo in ay u sheegtay kooxda reer Spain lacag dhan 180 milyan oo euro.
Salah ayay Real Madrid u aragtaa badalka ugu haboon ee xiddiga Gareth Bale kaas oo la filayo in uu ka tago kooxda ku ciyaarta Bernabeu.
Isla wargayska Don Balon ayaa sheegaya in uu xiddigii hore ee kooxda Liverpool ee Philippe Coutihho ogaaday in ay Liverpool u dhaqaaqi doonto saxiixyada Thomas Lemar iyo Gareth Bale si ay badal uga dhigaan Mohamed salah.